Us About - Shanghai SOG Bamka Co., Ltd
Sida wanaagsan sida biyo oo kale
Adeega Afcelinta suuqa
Shanghai SOG Bamka Co., Ltd. oo la asaasay 2005. Waxaa naga go'an tahay in soosaarka bambooyin oo tayo sare leh oo ku hawlan bixinta "tayo sare-,-oolnimada sare, tamar-keydinta, iyo deegaanka-friendly" pumps.It ay ku shirkadaha keentay cusub ee china ee beeraha bir bamka culus iyo bamka wasakhda biyaha.
wax soo saarka keentay SOG waa taxane CDL & CDLF toosan ahama bamka culus multistage, taxane CHL & CHLF ahama siman bamka culus multistage, taxane CQB & ZCQ ahama bamka magnetic, ih & CZ & za taxane bamka ahama kiimikada, QBY taxane bamka diaphragm, taxane WQP ahama bamka wasakhda biyaha, WQGS taxane culus-waajib bamka wasakhda goynta, SGL & SGW dhuumaha taxane bamka culus iyo nidaamka bamka iyo system.which gacanta waxaa si ballaaran loo isticmaalo gaadiidka biyaha deggan yahay, ganacsiga iyo warshadaha. dareere warshadaha daawada, ilaalinta deegaanka, daaweynta biyaha iyo biyaha wasakhda iyo beeraha kale.
" SOG ha socodka biyaha more cajiib ah " Si loo gaaro khubarada bamka oo tayo sare leh ee, SOG keenaysaa heerarka caalamiga ah, isku khayraadka farsamo sare, ha u habaynta si joogto ah farsamada iyo tabo cusub si loo hagaajiyo heerka farsamada bamka ee. " Tayada ka yimaado masuuliyada, daacadnimo abuuraa qiimaha, iyo ixtiraam waa guul guul mustaqbalka " waa qiimaha asaasiga ah ee SOG. Macaamiisha Provid oo bambooyin iyo adeegyada kharash-ool ah waa mas'uuliyadda aasaasiga ah oo naga mid ah.
Integrity saldhig u ah ganacsiga, r espect waa aasaaska iskaashi habboonaanta. Waxaan ixtiraamaan danaha iyo dalabaadka kasta, raadiyo qaab guud oo halka dhismaha kala duwan, iyo gaaro natiijada guul-guul ka mid ah macaamiisha, shaqaalaha, iyo la-hawlgalayaasheeda horumarinta. si ay u dhisaan silsilad waara shirkadaha qiimaha.
Raadinta weeraryahanka mustaqbalka, SOG sii wadi doonaan si ay u horumariyaan warshadaha qaran. Iyada oo ruuxa gaadho aragtida ah " Dhis a ixtiraamo ganacsi ". SOG waxaa ka go'an in horumarinta iyo isticmaalka for khayraadka biyaha iyo deegaanka aadanaha ...